Iwu ala na ụlọ | Law & More | Eindhoven & Amsterdam
Iwu ala na ụlọ mejupụtara akụkụ niile dị n'iwu gbasara ihe anaghị emebi emebi. Anyị na Law & More nwere ike inyere gị aka na ndụmọdụ gbasara iwu mgbe ajụjụ ma ọ bụ esemokwu bilitere gbasara izu na ire nke ihe a na-agaghị echefu echefu. Na mgbakwunye na nke ahụ, anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ gbasara iwu gbasara iwu ụlọ na iwu ụlọ.
Ọ B RERSS RELỌ EGO EGO?
Ọ B INR RE AKWAWKWỌ Iwu ziri ezi
> Iwu iwu owuwu
> Iwu mgbazinye
> Chazụta ụlọ obibi azụmahịa
Dịka onye ọchụnta ego n’ime ngalaba ị na-ewu ihe, ị ga-eji ọtụtụ ndị ọzọ emekọrịta ihe. Ndi isi ulo, ndi okacha amara na ndi nkwekorita kwesiri ime nha doro anya, nihi na mmekorita nke ndi otu a n’emekorita ibe ha. N'ihi ọtụtụ njikọ aka na usoro iwu ihe owuwu, ndị otu ọ bụla nwere ọtụtụ ọrụ na ikike nke etinyere n'iwu. N'ihi ihe mgbagwoju anya nke njikọ aka, ụdị nsogbu okwu ọ bụla nwere ike ibilite. Kedụ ihe bụ ọrụ gị na ikike gị n'akụkụ ndị ọzọ? Cannye nwere ike ijide ya ma ọ bụrụ na mbibi dị na nsonaazụ nke ihe owuwu. Law & More nwere ikike inye gị ndụmọdụ gbasara iwu yana ịnwere ike ịgba akwụkwọ ma ọ bụrụ na ekwubiri na ọ dị mkpa.
Ọzọkwa, anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ gbasara iwu niile gbasara iwu obodo ị ga-arụ. N'ụzọ dị otu a, a ga - egbochi nsogbu dị ka ịmaatụ dịka ọmụmaatụ.
N'oge na-adịghị anya, anyị nwere ike ịnye gị, na ihe ndị ọzọ, na usoro ndị a:
• Mkpebi ikike gị na ọrụ gị dị ka onye na-eme egwuregwu n'ime usoro nhazi;
• Nye ndụmọdụ gbasara usoro na iwu ihe owuwu g’eme;
• Enyemaka ọ bụrụ na ejidere gị.
Law & More na-enyere ma ndị obibi ma ndị nwe ụlọ aka igbochi na idozi nsogbu nke iwu. Ndị bi n'ụlọ na ndị nwe ala nwere ikike ọrụ iwu pụrụ iche. Ndị a nwere njikwa iwu nke pụtara na ndị otu ahụ nwere ike iji nkwekọrịta onwe ha dochie ha. Na mgbakwunye, enwere usoro mmanye n'ime iwu mgbazinye. Mmadu enweghi ike idi iche na iwu ndi a, nke kachasi n’uche iche ndi bi na ya dika ndi ozo n’adighi ike, site na nkwekọrịta. Y’oburu na onodu n’otu ebe onye ibe gi adabaghi ​​na nkwekorita ya, enwere otutu ihe ichoro iji nwaa. N'ụdị ndị a ị nwere ike ịtụkwasị anyị obi maka inye gị ndụmọdụ gbasara iwu ịchọrọ.
• idekọ nkwekọrịta ụlọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ala;
• esemokwu banyere nkọwa nke nkwekọrịta;
• na-eme ihe ma ọ bụrụ na onye ọbịa ma ọ bụ onye nwe ụlọ anaghị eme ihe kwekọrọ na nkwekọrịta ekenyela;
• nkwụsị nke mgbazinye ụlọ.
Mgbazinye ụlọ obibi azụmahịa
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji azụ ahịa, ị ga-achọ oghere azụmahịa. Mgbe ị n’ebum n’obi ịgbazite ụlọ azụmahịa, a ga-etinyerịrị ụlọ mgbazinye. E nwere iwu iwu akọwapụtara maka ịgbazite ụlọ azụmahịa. Ihe anyị nwere ike inyere gị aka dị ka ndị a
• chọpụta ụdị nkwekọrịta mgbazinye na ikike kwekọrọ na ikike dị iche iche kwekọrọ;
• na-adụ ọdụ ma ọ bụrụ na ọnụahịa mgbazinye ego;
• na-enye ndụmọdụ gbasara nchedo nwechapụ.
Buildinglọ mara mma na-adọrọ mmasị gị? Bụrụ na ịchọrọ ịgbazite ụlọ a, ọ dị mkpa ịmata ma ọrụ ndị ịchọrọ iji… na-agbaso nsogbu ndị ime obodo kwuru maka ụlọ a. Law & More N ’ihe ọmụma banyere atụmatụ ịchebe ma wee nwee ike ikpebi ma oghere a dị.
Chazụta ụlọ obibi azụmahịa
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụta ụlọ maka azụmaahịa gị ma ọ bụ nwee nke ị nweburu, mgbe ahụ anyị nwere ike inyere gị aka n’okwu ndị a:
• mkparịta ụka nke nkwekọrịta ịzụta;
• nkọwa nke nkwekọrịta;
• imebi nkwekọrịta nke onye nwe ya;
• ịkwụsị nkwekọrịta ahụ;
• nnyefe na usoro ego.